यसकारण मलेसियाले नेपालबाट कामदार लैजान चाहेको छैन ! - jagritikhabar.com
यसकारण मलेसियाले नेपालबाट कामदार लैजान चाहेको छैन !
गत डिसेम्बर १० मा मलेसियामा बंगलादेशी कामदार भर्ना गर्नका लागि बंगलादेशको प्रवासी कल्याण तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय र मलेसिया सरकारबीच सम्झौता गर्ने सहमति भयो ।
यो सहमति पछि अहिले बंगलादेशबाट मलेसियामा कामगार लैजाने तैयारी तिब्र भएको छ । यसअघि सहमति भइसकेको वृक्षारोपण क्षेत्रबाहेक सबै क्षेत्रमा विदेशी कामदार भर्ना खुला गर्ने सहमति भएको सार्वजनिक भएपछि विगत तीन वर्षदेखि
नयाँ कामदार जान नपाएको नेपालमा पनि त्यसले एक प्रकारको खुशी ल्यायो । मलेसियाले विदेशी कामदारका लागि वृक्षारोपण, कृषि, उत्पादन, सेवा, खानी तथा उत्खनन्, निर्माण र घरेलु कामदारहरूका लागि भर्ना खुला हुने बताएको छ । तर शुक्रबार आयोजित नेपाली राजदूतावास मलेसियाको नियमित साप्ताहिक फेसबुक लाइभमा मलेसियामा नयाँ
कामदारको भर्ना खुला भएकोबारे नेपाली दूतावासलाई कुनै जानकारी नआएको बताइयो । कार्यक्रममा नेपाली कामदारहरू मध्ये अधिकांशले नयाँ कामदार भर्ना कहिले खुल्छ ? भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए ।
उनीहरूले यसअघि लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सन् २०२२ देखि मलेसियामा कामदारको तलब बढ्ने विषयमा पनि चासो रोखे । तर दुवै प्रश्नमा मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव प्रदीप कार्कीले दूतावासलाई केही जानकारी नरहेको बताए ।
समाचारले बंगलादेशबाट कामदार मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले मासिक तलबको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी तलबमा कटौती गर्न पाउने उल्लेख गरेकोे छ । मलेसियन रोजगारदाताले अध्यागमन प्रासेसिङ शुल्क, अल्पकालीन
रोजगारको भिजिट पास वापतको शुल्क, सामाजिक सुरक्षा बीमा रकम, विदेशी कामदारको स्वास्थ बीमा शुल्क र अन्य बीमा शुल्क, मलेसियामा हुने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, अध्यागमन किलिरेन्स शुल्क, जहाज भाडा, एटेस्टेशन शुल्क, कोभिड परीक्षण शुल्क र स्थानीय तहमा लाग्ने शुल्क कामदारको तलबबाट कटाउन पाउने समाचारमा उल्लेख छ ।